शिल्पा पोख्रेल वि’वादमा नाम जोडिएपछि शंकर बिसी बोले सचिन परियार वि’वादबारे के भने ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
April 23, 2021 AdminLeaveaComment on शिल्पा पोख्रेल वि’वादमा नाम जोडिएपछि शंकर बिसी बोले सचिन परियार वि’वादबारे के भने ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
फिल्म इन्डस्ट्रीमा विभिन्न गसिपहरु त चालिने रहेको हुन्छन । फिल्मकर्मीको विवाह र डि’भोर्स, यो नितान्त व्यक्तिगत मामिला हो । तर सेलीब्रेटीका गतिविधि प्रति मिडियाको नजर सधै हुन्छ । हिरोईनहरुको विवाह र डि’भोर्सले पटक पटक चर्चा पाउने गरेको छ । नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीका चर्चित फिल्म मेकर छवीराज ओझा पनि यस्तै विषयमा चर्चामा आई रहन्छन ।
पछिल्लो पटक कान्छी श्रीमती शिल्पा पोखरेलले पति ओझावि.रुद्ध प्रहरीमा उ’जुरी गरेर अहिले मु’द्दा अदालतमा चलिरहेको छ । छविराज ओझाको शिल्पा चौथी श्रीमती हुन । यसअघि उनले नेपाली सिने जगतकी चर्चित अर्की अभिनेत्री रेखा थापासँग डि’भोर्स लिएका थिए । तर शिल्पासंगको डि’भोर्स भने ओझालाई महँगो परेको छ ।
शिल्पाले विभिन्न आ’रोप लगाउदै छवीसंग छुटकारा माग्दै मिडियामा रु’दै आएको बेला देखि अहिले सम्म चुप बसेका ओझा बल्ल आएर मुख खोलेका छन । उनले सबै कुराको विस्तृतमा स्पस्टिकरण दिएका छन । यसै बीच छविराज ओझासंग शिल्पालाई भेट्टाईदिने कलाकार शंकर बिसी पनि यस बारेमा बोल्न मिडियामा आएका छन । पुरा भिडियो यहाबाट हेर्नुहोस्ः